स्नुकर टोलीको स्वागत « KhelkudNews.com
स्नुकर टोलीको स्वागत
Published On : 18 September, 2021 7:45 pm
नेपाल स्नुकर, बिलियर्ड तथा पुल सङ्घले ३६ औँ एसियाली पुरुष स्नुकर च्याम्पियनसिपमा सहभागी भई स्वदेश फर्किएको नेपाली टोलीको शनिवार स्वागत गरेको छ ।
सेप्टेम्बर १२ देखि १६ तारिखसम्म भएको प्रतियोगितामा २ खेलाडीसहित ३ सदस्यीय नेपाली टोली सहभागी थिए । उनीहरूलाई सङ्घका अध्यक्ष चार पटकका स्नुकरका राष्ट्रिय च्याम्पियन सरोजकुमार मुल्मी, महासचिव केशव अधिकारी, खेलाडीलगायतले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गरे ।
रेगन श्रेष्ठले प्रिक्वाटर फाइनलसम्मको यात्रा तय गरे । लिगमा रेगनले ४ खेल मध्ये ३ मा जित हात पार्दै अन्तिम ३२ का लागि छनोट भएका थिए । उनले लिगमा कतारलाई ४–३, युएईलाई ४–२ र इराकलाई ४–३ ले पराजित गरेका थिए । भारत विरुद्धको खेलमा भने रेगन ४–० ले पछि परे ।
अन्तिम ३२ को प्रतिस्पर्धामा रेगनले कतारलाई ४–३ ले हराउँदै प्रिक्वाटरफाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेका थिए । प्रिक्वाटरफाइनलमा भने रेगन इरानसँग ४–० ले रोकिए । प्रतियोगितामा रेगनले ८३ अङ्कको ब्रेक गर्दै ४२ खेलाडी सहभागी मध्ये ११ औँ स्थान हात पारे ।
अर्का खेलाडी निर्मल बोगटीले समान २–२ खेलमा जित÷हार आत्मसात् गरे । उनले जोर्डनलाई ४–२ तथा कुवेतलाई ४–३ ले पन्छाएका थिए । निर्मल पाकिस्तानसँग ४–० र कतारसँग ४–३ ले चुके ।
अध्यक्ष मुल्मीले सीमित श्रोत र साधनका बाबजुद खेलाडीले उच्च प्रदर्शन गरेकोमा बधाई दिँदै नेपाली खेलाडी पनि कोही भन्दा कम नभएको सन्देश दिन सफल भएको धारणा व्यक्त गरे ।
नेपाल स्नुकर, बिलियर्ड तथा पुल सङ्घका सचिव समेत रहेका सञ्जयकुमार मुल्मीले टोली प्रशिक्षकको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । सङ्घका अनुसार प्रतियोगितामा विभिन्न १९ राष्ट्रका ४२ खेलाडीले सहभागिता जनाएका थिए ।
दुई मन्त्रीको स्वागत, मुख्य प्रशिक्षक सम्मानित
नेपाल तेक्वान्दो सङ्घले बिहीबार दुई मन्त्रीलाई स्वागत गरेको छ । सङ्घको उपाध्यक्ष समेत रहेका श्रम,
“क्लबहरू कर्पोरेट स्वरूपमा जान आवश्यक छ ” डा . पुन
डा. लाल कुमार पुन । ब्रिगेड ब्वाइज क्लबका अध्यक्ष । रेडियोलोजीस्ट पुन एलाइट हेल्थ क्लिनिकका
अनिताको सहयोगी कदम
टेबल टेनिस खेलाडी अनिता महर्जनले आफ्नो जन्म दिनको अवसरमा अपाङ्गता अस्पताल जोरपाटीमा रहेकाहरूलाई खेल सामग्री